တစ်ကြောင်းတည်းဆို ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ဘူးလား – Healthy Life Journal
Posted on ဇှနျ 23, 2019
မေး ။ သမီးအိမ်ထောင်သည်ပါ။ ဘာတားဆေးမှမသုံးပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က… ကလေးလိုချင်လို့ အိုဂျီနြဲ့ပတာ အကုန်ကောင်းပါတယ်။ သူပေးတဲ့ သံဓာတ်အားဆေးကို တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်ပါတယ်။ အရင်လတွေက ရာသီအမြဲမှန်ပါတယ်။ အခုလရက်ကျော်နေတာ တစ်ပတ်ရှိပါပြီ။ ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်က စစ်ကြည့်တာ တစ်ကြောင်းပဲ ပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစာစားပြီးတိုင်း ပြည့်အင့်အင့်ကြီးခံစားရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိရဲ့သားနဲ့ မပေါ်သေးတာရော ဖြစ်တတ်ပါသလား။
ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ ။ ကလေးရဖို့ ကြိုးစားနေတယ်၊ ရာသီ ရက်ကျော်နေပြီ၊ ပြည့်အင့်အင့်ကြီးဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးစစ်ရင် မနက်စောစောပေါက်တဲ့ ဆီးကိုစစ်။ ဆီးစစ်တဲ့ပစ္စည်း တံဆိပ်ပြောင်းပြီး ထပ်စစ်ကြည့်ပါဦး။ နောက်တစ်ပတ် ထပ်စောင့်။ ရာသီမလာသေးရင် ထပ်စစ်ကြည့်။ ရာသီရက်ကျော်တိုင်း ကိုယ်ဝန်ရှိပြီလို့လည်း ရာနှုန်းပြည့်တော့ မပြောနိုင်ဘူး။ စိတ်ထဲက ကလေးသိပ်လိုချင်ဇောကြီးရင်လည်း စိတ်အစွဲနဲ့ ရာသီမလာတာ ဖြစ်တတ်ပြန်ရော။ မသင်္ကာရင်တော့ ဆရာဝန်ပြကြည့်။ ကိုယ်ဝန် “ ၆ ပတ်” ဆို အာထရာဆောင်းမှာပေါ်ပြီ။
Related Items:conceive, Pregnancy
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တို့ သတိပြုသင့်သည့် Amniotic Fluid Embolism အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများ သိကောင်းစရာ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်းအဖြာဖြာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဆီးချိုဖြစ်ခြင်းနှင့် အာဟာရ (၃)
သုတေသနလေ့လာမှုအရ သိရသည့် သက်ရှည်ကျန်းမာရေးအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်
မာလ်တီဗီတာမင်အားဆေးတွေကို ပုံမှန်သောက်သုံးဖို့ လိုပါသလား . . .
Featured weird Nutrition News Beauty Skin Care kid Food Female Diabetes Pregnancy mental care Healthy Life Cancer Physical Exercises Lessons Eye Care Celebrities Foods Experience Male Dental Care Knowledge Weight Loss Myanmar Health fun Stress laughter Family Sleep Lesson Vegetables Mental Health Hypertension Home Remedies Sex cancer survivor Marriage Actress Menstruation